I-cottage itholakala kwinduli ezolileyo, enelanga ngasehlathini kunye nombono omhle ovela eBuchlov phezu kweenduli zeProvodov kunye neVizovice ngaphezu kwedolophana yaseVšemina. Umhlaba onegadi kunye nendawo yokupaka ubiyelwe, ukufikelela kwi-cottage kuhamba ngehlathi kunye nendlela yasendle. Kukho indawo yokuhlala yangaphandle egqunyiweyo, ishawari yangaphandle, indawo yokosa inyama, indawo yomlilo ephathwayo kunye nentenetya yetafile.
Kukho amagumbi amabini ahlukeneyo. Kwigumbi elinye lokulala kukho ibhedi ephindwe kabini, kwelinye kukho iibhedi ezimbini ezingatshatanga ezinokubakho iibhedi ezimbini ezongezelelweyo. Omabini amagumbi okulala abekwe kwiattic. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala, iTV, ikhitshi kunye negumbi lokutyela. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya izixhobo zombane- ifriji enefriji, iketile, imicrowave, ioveni ene hob. Kwigumbi elingaphantsi kukho indawo yomlilo eneendawo zokuhlala kunye nokwenzeka kwemidlalo yebhodi - iidathi zombane, ibhola yebhola, imidlalo yebhodi. Kwigumbi elingaphantsi kukho igumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese kunye nomatshini wokuhlamba. Indlu yangasese yesibini ikumgangatho ophantsi.
Ithuba lokuqubha, ukuloba kunye nemisebenzi yangaphandle kwidama i-Všemina elise-1 km ukusuka kwindlwana. Kufuphi nequla kukho ihotele iVšemina enechibi langaphakathi, ikhilomitha eyi-1 emva kwehotele kukho ifama enamahashe. Maninzi amathuba ohambo kule ndawo:
9 km amabhodlo enqabeni Lukov
I-12 km Vizovice - Vizovice chateau, tyelela imyuziyam ye-slivovice kunye nevenkile yenkampani yaseJelínek
I-20 km Lázně Kostelec - ichibi lokuqubha elinechibi elishushu, ibala legalufa
I-23 km yesixeko saseZlín - imyuziyam yesihlangu, tyelela iZlín skyscraper, inqaba yaseMalenovice
25 km Spa Luhačovice
Iikhilomitha ezingama-35 idolophu yaseKroměříž - chateau enenqaba kunye negadi yeentyatyambo